Tuesday, June 24th, 2008 Comments Off
Hargeysa (Somaliland.org) – Xisbiga ugu weyn mucaaridka Somaliland ee KULMIYE, ayaa warsaxaafadeed uu maanta soo saaray kaga hadlay arrimo dhowr ah oo uu ka mid yahay sicir-bararka maceeshadda iyo shidaalka oo si ba’an u saameeyey nolosha qoysas badan oo reer Somaliland ah, gaar ahaanna qoysaska saboolka ah. Waxana uu ugu baaqay in talo qaran laga […] Togdheer: Gobol la qaawiyay oo Magaalo kaliya ah. Warbixin, By: Liibaan Maaweel Shire
Magaalada Burco waxay magaalo madax u ahayd Gobol deegaan ahaan balaadhan oo isu dheeli-taran, hase ahaatee, sidii maalinba in loo jarayay ee loo soo koobayay haatan Togdheer waa Burco oo kaliya. Ka dib markii degmooyinkii ugu danbeeyay laga gooyay ee Gobolo laga dhigay sida Oodweyne, Boohoodle iyo Sheekh oo hore looga jaray. Burco, waa hooyadii […] Beesha Bariga Burco Sidee Bay U Aragtaa Sheekadii Ahayd “Hargeysa Ka Baxa”
Akhristayaal sheekada ka baxadu waxay hore uga dhacday Caasumadda Somaliya ee Muqdisho, waayo waxa dhacday inay niman lagu xanto inay shahaado u sitaan iska horkeenka beelaha ay maalin la shireen beesha Abgaal oo uu ku yidhaahdeen Xamar waxa iska leh Abgaal, cadawgiinuna waa Habar-gidir, ka dibna beesha Abgaal waxay bilaabeen inay fogeeyaan beesha Habar-gidir, waana la ogyahay halka uu xaalku maanta marayo ilaa ay sheekadu gaadhay in inta Xabashi la soo kaxaysto la yidhaahdo Habar-gidir waa Argagixiso ee naga saara... Ismaaciil Cumar Geelle oo la kulmay Weftiga Daahir Riyaale iyo Dareenka ka dhashay Hab-maamuuska hooseeya ee lagu qaabiley weftiga
Monday, June 23rd, 2008 Comments Off
Djabouti (Somaliland.org) – Hoggaamiyaha Xisbiga talada haya ee UDUB, Daahir Riyaale Kaahin oo booqasho ku jooga Jabuuti ayaa maanta la kulmay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo qado sharaf u sameeyey isaga iyo xubnaha weftigiisa. Lama sheegin kulankaa waxa ay ka wadahadleen mudane Riyaale iyo madaxweynaha Jabuuti. Hase yeeshee, waxa la filayaa inuu […]